သူတို့လဲ ဒုက္ခရောက်နေတယ် ဝိုင်းဝန်း အကြံပေးကြပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သူတို့လဲ ဒုက္ခရောက်နေတယ် ဝိုင်းဝန်း အကြံပေးကြပါ
သူတို့လဲ ဒုက္ခရောက်နေတယ် ဝိုင်းဝန်း အကြံပေးကြပါ
Posted by နတ်ဆိုးလေး on Mar 19, 2012 in Copy/Paste |6comments
အကူအညီပေးနိုင်သူများ ကူညီပေးပါရန် လေးစားစွာဖြင့် အနှုးအညွတ် တောင်းခံပါသည်။
by Lumin Thaungtun on Sunday, March 11, 2012 at 11:51am ·
နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ကူညီမှုပေးနိုင်သော လူကြီးများထံပေးစာ
ကျွန်တော်၏အမည်မှာ အောင်ကျော်သူဖြစ် ပြီး ကိုယ်ပိုင်အမှတ်-36303/တပ်ကြပ် အဆင့်ဖြင့်တပ်မတော်ရေတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်း လူမှုဒုက္ခရောက်နေပါသဖြင့်
ကျွန်တော်သည် 2002 ခုနှစ်တွင် 10တန်းအောင်မြင်ပြီး 5နှစ်သက်တမ်းအာမခံစာချုပ်ဖြင့်
များတွင် သက်စွန့်ဆန်ဖျားဖြင့်သွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ နာဂစ်မှုန်တိုင်း
တွင်လည်း ကလေးငယ်ဖြင့် အိမ်ပြိုသွားသောဇနီးသည်အား ပြန်လည်မကူညီနိုင်ပဲ တိမ်းမှောက်သွားသော ကျွန်တော်၏ စစ်ရေယာဉ်415အား ပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင် တစ်လ နှင့် တစ်ရက်ကြာအောင်သစ္စာရှိစွာဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။
ယခု ကျွန်တော်သည် မြိတ်မြို့နယ် အစွန်ဘက် ပင်လယ်ထဲရှိ ရေနံစင် အားလုံခြုံရေး တာဝန်အဖြစ် (9လ)မျှတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်တပ်လိုင်းခန်းတွင်ကျန်ခဲ့သော ကျွန်တော်၏ဇနီးအား ရဲဘော်ဖြစ်သူမှသစ္စာမဲ့စွာဖြင့် ခိုးယူပေါင်းသင်းရန် တစ်ဘက်နိုင်ငံသို့ ခေါ်ဆောင်သွားပါသည်။ ကျွန်တော့တွင်2နှစ် နှင့် 6နှစ် ကလေးငယ် နှစ်ဦးဖြင့်ကျန်ခဲ့ပြီး တပ်လိုင်းခန်းမှ (3)ရက်အတွင်း ဆင်းပေးရန်တပ်မှ နှင်ချခံခဲ့ပါသည်။
-သို့ဖြစ်ပါသဖြင့် ကျွန်တော်အလုပ်မှာ ပင်လယ်ထဲတွင် စစ်သဘောင်္အား စက်ပြင်တာ ၀န် ဖြစ်နေသည်က တစ်ကြောင်း သင်္ဘောတစ်စီးထဲတွင် အခြားသူများ၏ အထင်အမြင်
သေးခြင်း ခံရခြင်းကြောင့်တစ်ကြောင်း အခက်အခဲများရှိပါသဖြင့် ရွာတွင်ကျန်ခဲ့သော
76 နှစ်အရွယ် အမေအိုအား ပြုစုစောင့်ရှောက်ရင်း လယ်ယာလုပ်ငန်းအား ပြန်လည်လုပ်
ကိုနိုင်ရန် တပ်မတော်မှ နှတ်ထွက်ခွင့်ပြုပေးဖို့ တင်ပြခဲ့ပါသည်။
၄င်းတင်ပြမှုအားလက်မခံပဲ စစ်ရေယာဉ် 558မှ ဗိုလ်မှုးသန်းဇော်ထိုက်သည် ကလေးငယ်နှစ်ဦးအား ဆွေမျိုးများထံအပ်နှံပြီး တပ်မတော်တွင်ပြန်လည်ထမ်းဆောင်ရန်
တွန်းအားပေး လက်မှတ်ထိုးခိုင်းခဲ့ပါသည်။ ယင်းအခက်အခဲများကြောင့် ဆက်လက်
တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်းတင်ပြသောအခါ ကျွန်တော့အား 12.2.2012 နေ/့
မှ 16.2.2012 ထိ တပ်အချုပ်ထဲ တွင် ထည့်ထားခဲ့ပါသည်။ အပြင်တွင်ကျန်ခဲ့သော ခလေး
များမှာ ကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သဖြင့် ဒုက္ခရောက်နေသောကြောင့် တာဝန်ပြန်လည်ထမ်းဆောင်ပါမည်ဟု တောင်ပန်သောကြောင့် ပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့ပါ
ထို့ကြောင့်ယခုတွင် ကျွန်တော်သည် ကလေးငယ်နှစ်ဦးဖြင့် စေလွှတ်သောနေရာ
တွင် သွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် စောင့်ဆိုင်းရင်း ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်နေပါသဖြင့်
နတ်ဆိုး လေး has written 16 post in this Website..
View all posts by နတ်ဆိုးလေး →
တပ်တွင်းကိစ္စ ဖြစ်နေတော့ ကာချုပ်(ရေ)ထံတိုက်ရိုက်အသနား
ဟယ်!! သားလေးနှစ်ယောက် ပုံစံလေးက သနားစရာကွယ်….
နတ်ဆိုးလေး က အားလုံးကို ဖော်ထုတ်ဖို့ လုပ်နေတာပါ မကြောက်ဘူးလားဆို ကြောက်တာပေါ့။ ဖမ်းရင်ပြေးမယ်။ မိရင် အသနားခံမယ် ။ မန်းလေးမှာ မော်တော်ပီကယ် ဖမ်းခံရသလိုပေါ့။ ငိုပြလိုက်မှာဘဲ။ ဗြဲ…… နတ်ဆိုးလေးနော့် ဒီနာမည်ပေးတာကိုက (အသံကျယ်လောင်စွာဖြင့်) အဲ့လိုလုပ်ဖို့…. (အသံ တိုးသွားပြီ) ဒီနာမည်ပေးထားတာ(အသံမထွက်တော့ပါ) :p
အင်တာနက်ပေါ်တင်တာ ကာယကံရှင်တွေ လူမသိ သူမသိ ဒုက္ခရောက်တဲ့အပြင် တင်တဲ့ ဆိုဒ်တောင် အပြစ်ပြောခံရတယ်။လောလောဆယ် ပြည်သူတွေရဲ့အသံကို အင်တာနက်ပေါ်တင်ပေးတဲ့ သစ်ထူးလွင်ဆိုဒ်ကို မြန်မာ ပြည်လူတွေ ဆိုဒ်ထဲဝင်လို့ မရအောင်ပိတ်လိုက်ပြီးတဲ့ လုပ်ကြပါအုံး….ဒုက္ခ …ဒုက္ခ…ဒီ ဒုက္ခတွေထဲက မြန်မာ ပြည်သူတွေ ဘယ်တော့လွတ်မလဲ
ဘယ့်နှယ်.. မိန်းမ လုပ်တဲ့သူက အလိုတူ အလိုပါများ ပါသွားသလားဘဲ…….
လူမမယ် ကလေးနှစ်ယောက်ကို ပစ်ပြီးတော့များ…..
ကူညီချင်ပေမယ့်လည်း ဘယ်လိုကူညီမလဲကိုယ့်ဖေကလည်း အရာရှိအရာခံမဟုတ်လက်လုပ်လက်စားသမား လေ ကူညီလို့ရမယ့်သူကကူညီဖြေရှင်းပေလိုက်ကျပါနော်